Ningayeki ukufaka i-ANC enkantolo ize ifunde ukuhola – Bheki Cele | News24
Durban – ILungu leNational Executive Committee (NEC) ye-ANC, uBheki Cele, ushaywa amahloni ngokuhluleka kwe-NEC ukuhola inhlangano, nokugcina sekuholela ekutheni amalungu ayo anikele ezinkantolo.
“Kumele sishaywe amahloni, ngishaywa amahloni. Umlando kuzomele usijezise ngokuvumela izinkantolo ukuthi zisihole,” kusho uCele.
UCele, nophinde abe nguSekela Ngqongqoshe wezoLimo, ezamaHlathi kanye nezokuDoba, ubekhuluma namagatsha e-ANC eMlazi ngeSonto ngaphambi kwecala lasenkantolo ekade lalindelwa elibhekene nobuholi be-ANC KwaZulu-Natal.
Amalungu e-ANC esifundazweni afuna kuchithwe ingqungquthela yangonyaka ka-2015 yesifundazwe, njengoba ekhala ngokuthi azihambanga kahle izinhlelo zayo.
Lowo owayenguNdunankulu wesifundazwe futhi enguSihlalo we-ANC esifundazweni, uSenzo Mchunu, wakhala ngaphansi kule ngqungquthela, nalapho kwakhethwa khona osenguSihlalo, uSihle Zikalala, kanye neProvincial Executive Committee (PEC) ekhona njengamanje.
OLUNYE UDABA:AmaLunga ePhalamende e-ANC ‘ayizephulamthetho’ angeke axoshwe – Umhlaziyi
La malungu angeneme afuna ukuba kugudluzwe iPEC yesifundazwe ekhona njengamanje, kuphinde kubuyiselwe emuva zonke izinqumo esizithathile kusukela yaqokwa. Lolu daba luzolalelwa yibhentshi eliphelele eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu kusukela ngoLwesithathu kuya kuLwesihlanu.
“Ungalenzi iphutha lokucabanga ukuthi leli cala limayelana nabantu abathile. Limayelana ne-ANC kanye nokuhluleka kwayo ukuhola njenge-ANC. I-NEC ye-ANC kumele yamukele ukuthi ithina okumele siphendule ngaleli cala. Siyahluleka ukuhola,” uCele usho kanjalo maqede kwahwaza izethameli ehholo.
Uthi i-ANC isikhombise kwaze kwaba kaningi ukuthi ayikwazi ukubhekana nengokungaboni ngaso linye okwethulwa ngaphambi kwayo amalungu ayo. Uthi amalungu agcina eseya ezinkantolo ngoba isuke ingasekho into angayenza.